Ukubhukha indiza yase-Singapore kufinyelele esiphethweni sama-VTL
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Singapore Breaking News » Ukubhukha indiza yase-Singapore kufinyelele esiphethweni sama-VTL
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • I-Singapore Breaking News • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Izindlela zokuhamba ezigonyiwe (ama-VTL) zethulwe ekuqaleni kukaSepthemba, okuvumela abahambi abagonyiwe abaya eSingapore ukuthi bagweme ukuba ngaphansi kwesaziso sokuhlala ekhaya uma esikhundleni salokho benza izivivinyo eziningi ze-COVID-19 PCR.
Umbiko omusha uveza ukuthi kube khona ukwanda kokubhukha indiza ukusuka nokuya Singapore ngoDisemba 22 ngonyaka odlule, njengoba abahambi baphuthuma ukushaya ukumiswa kwe Singapore's vacciinated travel lanes (VTLs), eyasetshenziswa ukuze kunqandwe ukusabalala kokwahluka kwe-Omicron.
Ama-VTL ethulwa ekuqaleni kukaSepthemba, avumela abahambi abagonyiwe abaya eSingapore ukuthi bagweme ukuba ngaphansi kwesaziso sokuhlala ekhaya uma esikhundleni salokho benza izivivinyo eziningi ze-COVID-19 PCR. Ekupheleni kuka-December, Singapore yayinama-VTL endaweni enamazwe angama-24.
NgoDisemba 22, Singapore umemezele ukumiswa kokuthengiswa kwamathikithi e-VTL kusukela phakathi kwamabili ngalobo busuku kuze kube ngu-21st NgoJanuwari, lapho kuzoba ne-cap engu-50% kwisabelo sangaphambilini. Nokho, abahambi asebevele bephethe ithikithi lendiza ye-VTL bangaqhubeka nokungena eSingapore ngaphansi kwe-VTL ngedethi ababeyihlelile ekuqaleni. Ngalolo suku, ukuthengiswa kwamathikithi aphumayo kweqela ngaphezu kokuphindwe kane kwesilinganiso sansuku zonke seviki eledlule futhi kwangena ngaphezu kokuphindwe kabili.
Ngesonto elilandelayo (Disemba 23 - Disemba 29) amathikithi akhishelwe uhambo oluya ngaphakathi ehle ngo-51% futhi aphumayo ehle ngo-76%, uma kuqhathaniswa nesonto eledlule.
Ukuhlaziywa kwezimakethe zemithombo ephezulu zaseSingapore kuveze ukuthi bonke abayishumi abahamba phambili balahlekelwe kakhulu, ngamadijithi amabili ekubhukheni, ngaphandle kwaseHong Kong, eyehle ngo-8% kanye neDubai, ekhuphuke ngo-20% kwedlule. isonto.
Ukuhlaziywa kwezindawo eziyishumi eziphezulu okuyiwa kuzo kwembule ukwehla okukhulu nakakhulu ekubhukhelweni kwezindiza eziphumayo ngesonto ngemva kokumiswa kwe-VTL, ngaphandle kwase-Netherlands, ethole ukwenyuka ngo-11%.
Izindlela zokuhamba ezigonyiwe zibe wusizo olukhulu ekusizeni uhambo lokuya nokubuya e-Singapore, njengoba izimakethe eziyisikhombisa kweziyishumi eziphambili kanye nezindawo eziyisishiyagalolunye kweziyishumi eziphezulu amazwe e-VTL. Ngiyasola ukuqina kwe Netherlands njengendawo okuyiwa kuyo kuthonywa yi KLM, okwamanje okuyinkampani yenethiwekhi yangaphandle enesabelo esikhulu kunazo zonke se Singapore imakethe, ngenani lezihlalo.